Dowladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in malaayiin doollar ay ku bixinayso abaaraha ka jira dalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in malaayiin doollar ay ku bixinayso abaaraha ka jira dalka
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay shaaca ka qaaday in dhaqaale badan ay ku taageeri doonto gargaarka loo fidinaayo abaaraha ka jira inta badan gobolada dalka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Odowaa oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in 3 milyan doollar ay dowladda Soomaaliya ku taageerayso gurmadka abaaraha ee ka socda dalka.
Wuxuu wasiirka sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dadaali doonto in sida ugu dhaqsiyaha badan ay lacagtaasi ku gaarsiin doonto goobaha ay abaaraha ka jiraan ee dalka.
Inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay marar hore u ballan-qaaday taageero iyo dhaqaale ay ku bixineeyso abaaraha ka jira dalka ayaa hadane la ogeyn goorta ay bixin doonto lacagtaan tirada badan ee haatan ay ballan-qaaday.
Dhinaca kale, hadalkaan uu shaaciyay wasiir Odowaa ayaa kusoo beegmaya xilli shaqaalaha dowladda iyo ciidamada aysan wax mushaar ah helin muddo ka badan 6 bilood, halka qaarkoodna aysan weli qaadan mushaarka muddo 5 bilood ah.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay haatan gurmad deg deg ah u fidiso dadkeeda ku dhibaateysan gobolada dalka, waxaana xusid mudan in gobolada qaar ay abaartu gaartay heerkii ugu xumayd ebid.